Gtalk မှာ အရုပ်မျိုးစုံနဲ. ချက်ချင်ရင်တော့
My Theme.exe ပါ။ သူက ဂျီတော့ မှာ အရုပ်မျိုးစုံနဲ. ချက်လို.ရပါတယ်။
လုပ်ရမှာကတော့။ ဆော့ဝဲကို ဒေါင်းလော့လုပ်ပြီး ကလစ်နှစ်ချက်နှိပ်ပြီး Run ပေးပါ။ ပြီးရင် Gtalk Box ကိုဖွင့်ပြီး Settings ထဲကိုဝင်၊ ပြီးရင်
Appearance ထဲကို ထပ်ဝင်ပါ။ ညာဘက်ချမ်းမှာ Chat Theme ဘေးနားကမျှားလေးကို ဖွင့်ပြီး My Theme ဆိုတာကိုရွေးပေးပါ။ ပြီးရင်တော့ OK ပေါ့။ ပြီးရင် ဂျီတော့ Sign In ၀င်လို.ရသွားပါပြီ။ ပြီးရင် စမ်းသက်တဲ့ အနေနဲ.
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီကို :hi ဆိုပြီးစမ်းခေါ်ကြည့်ပါ။
ရေးရမယ့် Help ဖိုင်ကို လိုတာတို. Background ချိန်းချင်တာတို.ဆိုရင်တော့.၊
Start => Programs files => Dash => My Theme ရဲ့ အောက်မှာ ရှိပါတယ်။
လိုချင်ရင်တော့ ဒီမှာဒေါင်းလော့လုပ်ပါ။ @komyat
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 3:50 AM